रेभ. फादर पौल डिसोजालाई अन्तिम बिदाई - खबरम्यागजिन
Homeखबरकालेबुङरेभ. फादर पौल डिसोजालाई अन्तिम बिदाई
December 29, 2018 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि कालेबुङ, खबर 0
कालेबुङ, 29 दिसम्बर: दार्जीलिङ पहाडकै एकजना सुपरिचित शिक्षक एवं पूर्व प्राचार्य रेभ. फादर पौल डिसोजाको अन्तिम संस्कार आज सम्पन्न भयो। सन्त अगस्टिन स्कूल कालेबुङका सुपरिचित पूर्व प्रचार्य एवं वर्तमान सन्त स्टेफन्स एकाडेमी कफेरका कुशल शिक्षक फादर पौललाई गत 17 दिसम्बरका दिन अचानक ह्रदयघात आएपछि सिलगढीको एउटा नीजि अस्पतालमा उपचारकै क्रममा 27 दिसम्बरका दिन उनको निधन भएको थियो।
फादर पौल एक कुशल व्यवस्थापक अनि एक प्रतिष्ठित विज्ञान शिक्षक थिए जसले विद्यार्थीको कल्याणको लागि आफ्नो पूर्ण जीवन समर्पित गरे। उनले समाजलाई अमूल्य सेवा प्रतिपादन गर्दै आइरहेका थिए।
फादर पौल मंगलोरमा जन्मिए र उनको स्नातक पछि उनले दार्जलिङको डायोसिसमा नियुक्त भए। उनले सन्त अगस्टिन स्कूल कालेबुङमा प्राचार्यका रूपमा कार्य गरे। उनले नाम्ची पब्लिक स्कूल, सेन्त जोसेफ विद्यालय रिनक र सन्त जेभियर विद्यालय पाक्योङमा पनि पढाए।
अत्यन्त बौधिक, रचनात्मक अनि मलिनसार र मृदुभाषी स्वभावका फादर पौलले आजसम्म हजारौँलाई शिक्षा दिए।
उनले वर्तमानमा सन्त स्टेफन्स एकाडेमी कपेरमा गणित शिक्षक एवं पल्ली पुरोहितको रूपमा सेवा पऱ्याइरहेका थिए। तर अनाचक ह्रदयघातपछि दार्जीलिंग डायोसिसको पहलमा उनलाई बचाउन धेरै प्रयास गरिएपनि अन्तत: उनी जीवनदेखि हारे।
उनको अन्तिम यात्रा आज ख्रिष्टिय परम्परा अनुसार कालेबुङ सन्त ट्रिजा चर्च आठ माईलमा सम्पन्न भयो। ख्रिष्ट्रिय धर्म परम्परा अनुसार सम्पन्न अन्तिम यात्रअवधि उनलाई श्रद्ञ्जली अर्पण गर्न सैयौँ शुभचिन्तकहरू, पूर्व विद्यार्थीहरू, सहकर्मीहरू, आफन्तहरू, इष्टमित्रहरू आएका थिए। उनको पार्थिव शरिर सन्त टेरेजा चर्चमा राखिएका थियो उनलाई ख्रिष्ट्रिय परम्परा अनुसार प्रार्थना सभापछि दफ्नाइएको थियो। विसफ स्टेफन लेप्चा अनि सन्त स्टेफन्स एकाडेमीका प्राचार्य फादर फिलिक्स डिसोजाले उनको निधनले दार्जिलङ डायोसिस एवं पहाडको शिक्षाको क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको बताए।